Wafdi uu hoogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray magaalada Baydhabo
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa maanta booqasho howleed ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Wafdiga wasiirka ayaa waxa ka mid ah xubno ka tirsan golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga, wasiir ku-xigeennada warfaafinta iyo adeegga bulshada, waxaana halkaa si diirran ugu soo dhoweeyey mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bay, saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolkaasi ku sugan iyo qaybaha bulshada ee magaaladaasi.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa hoteel ku yaalla magaalada Baydhabo waxa ay kulan kula qaateen xubno isugu jiray culimaa'u-diin, odayaal dhaqameed, qaybaha kale ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka dowladda ee gobolka.
Mudane Cabdikariim oo la hadlayey mas'uuliyiintii iyo dadkii isugu yimid madasha ayaa sheegay in ujeeddada socdaalkoodu ay ahayd in ay soo ururiyaan afkaarta bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada dalka, si dhammaanba gobollada iyo degmooyinka loogu soo dhiso maamullo ay dadka degaannadu u dhan yihiin.
Ugu dambeyntii mudane Guuleed ayaa mas'uuliyiinta iyo qaybaha bulshada ee gobolka Bay ku boorriyey in ay ka qaybqaataan howlaha lagu sugayo ammaanka dalka, asagoona uga mahad celiyey sida wanaagsan ee isaga iyo wafdigiisa loogu soo dhoweeyey magaalada Baydhabo.